macOS High Sierra waa nidaamka cusub ee hawlgalka ee Mac | Wararka IPhone
Way cadahay in macOS ay sidoo kale yeelan doonto door hogaamineed gudaha muhiim ah inaan hadda nool nahay. Magaciisu waa macOS High Sierra, Xitaa haddii ay been u egtahay. Daqiiqadaha ugu horeeya, waxay durbaba shidaal kusii dareen cajiinka iyagoo hubinaya in Safari cusub uu yahay ilaa 80% ka dhakhso badan Chrome. Halkaan waxaad ka heleysaa sheekooyinka ugu waaweyn ee macOS High Sierra, kuwaas oo ay ka mid yihiin: nidaamka isku-buufinta ee APFS, Birta 2 iyo wax ka beddelka Sawirada iyo Boostada
Codsiga Boostada Waxaa sidoo kale soo gaadhay xoogaa waji ah. Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ayaa ah in la fulin karo kala qaybsan aragtida shaashadda buuxda, oo leh codsiyo sida Horudhac dhammaystirka qorista ama la-tashiga dukumenti.
Ma fileynin taas Fotos waxaa lagu cusbooneysiin doonaa macOS High Sierra, laakiin hadda ayey ku dhawaaqeen iswaafajinta wejiyada ka dhexeeya qalabka, wax in badan oo naga mid ahi ay sugayeen muddo dheer. Waxay sidoo kale hagaajiyeen tifaftiraha iyo mashiinka raadinta.
Mid ka mid ah cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ugu dambeeyay ee macruufka ayaa la keenay xog cusub oo ku saabsan xogta ku keydsan qalabkeenna: APFS. Hadda, macOS High Sierra waxay u timaaddaa inay hagaajiso xoqinta xogta iyo hagaajinta kalsoonida iyo xawaaraha akhriska iyo qorista dhammaan dhinacyada nidaamka qalliinka.
Marka la eego dib u soo celinta iyo maaraynta fiidiyowyada, macOS High Sierra waxay isku daraysaa koodh cusub: H265, taas oo hagaajinaysa cadaadiska kii ka horreeyay: H40 264%.
Muuqaal kale oo Apple ay rabtay inay muujiso inta ugu badan waa nooca cusub ee Birta: Birta 2 xaqiiqda dalwaddii, sababtoo ah kororka caan ku ahaanshaha VR ee warshadaha. Waa guul u soo hoyatay horumariyeyaasha oo u oggolaan doona ballaarinta hal-abuurnimadooda.
Waxaa heli doona kuwa horumariya maanta, halka Beta beta ayaa la heli doonaa dhamaadka Juun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » macOS High Sierra: nidaamka cusub ee loogu talagalay Macs
iMac Pro, bahalka cusub ee Apple ee aad ku riyoon doonto inaad yeelato